I-PhotoShrinkr - iMac App Yokukhulisa Izithombe Ezisezingeni Eliphezulu | Plum Amazing
Okusheshayo: 5 / 20 / 19
I-PhotoShrinkr ilungiselela ukucindezelwa kwefomethi ye-.jpg ngezindlela i-Photoshop nezinye izinhlelo zokusebenza ezingakwenzi. Ilungele abathwebuli bezithombe ngezinkulungwane zezithombe. I-PhotoShrinkr iyashesha ngendlela emangalisayo, yonga isikhala futhi yonga isikhathi. Landa uhlelo lokusebenza ukuze uzame mahhala. I-PhotoShrinkr inikeza ukusetshenziswa kwamahhala okungu-5 ngosuku.
Isebenziseka ngokumangalisayo ngomthwebuli wezithombe abe nayo emgodleni wakhe wamathuluzi. - U-Andy H.
I-PhotoShrinkr - Uhlelo lokusebenza lweMac lokwengeza ubuningi bezithombe zekhwalithi ephezulu
I-PhotoShrinkr uhlelo lokusebenza lokwehlisa kakhulu usayizi wesithombe ngenkathi igcina ikhwalithi ebonakalayo ebonakalayo. I-PhotoShrinkr ilungiselela ukucindezelwa kwefomethi ye-.jpg ngezindlela i-Photoshop nezinye izinhlelo zokusebenza ezingakwenzi. Nciphisa ngokuphawulekayo usayizi wezithombe bese ugcina ikhwalithi ebonakalayo. Landa uhlelo lokusebenza ukuze uzame mahhala. I-PhotoShrinkr inikeza ukusetshenziswa kwamahhala okungu-5 ngosuku.
"FUTHIukuminyanisa kwethu kusondele kakhulu kumlingo wamafayela we-JPG aphuma ku-Nikon wami. ” - UMark S.
Sisebenze izinyanga sicabanga ngemininingwane yokuminyaniswa kwe-jpg nokwakha ama-algorithm wokunciphisa usayizi ngokumangazayo ngenkathi sigcina ikhwalithi yokubuka ephezulu kakhulu.
Uma unewebhusayithi futhi ufuna ukusheshisa isivinini sokulanda ikhasi lolu hlelo lokusebenza alusebenzi. - UJoel K.
Ilungele abathwebuli bezithombe ngamashumi noma ngamakhulu ezinkulungwane ezithombe.
Kuhle kakhulu kubaphathi bewebhu abafuna ukuthi amasayithi abo alayishe ngokushesha. Ukunciphisa usayizi wesithombe kunciphisa isikhathi sokulayisha sesayithi. Isikhathi sokulayisha esisheshayo sisho abasebenzisi abaningi futhi abajabulayo. Futhi yehlisa umthwalo kuseva kanye nenombolo yama-byte adlulisiwe.
Ilungele abathuthukisi okuvamise ukuthi bathumele amakhulukhulu wezithombe-skrini zesibonisi somsebenzisi kuzincazelo nakwizincwajana.
Ilungele izinkampani ezifuna ukwandisa ukusebenza kahle futhi zinciphise izindleko.
I-PhotoShrinkr iyashesha ngendlela emangalisayo, yonga isikhala futhi yonga isikhathi. Icindezela amafayela we-.png futhi ingaguqulela izithombe zibe Ifomethi ye-heif kakhulu.
I-interface ikhombisa ngokusobala ikhwalithi nokucindezelwa, Ngaphambi (kokwangempela) nangemva koku (okucindezelwe nge-PhotoShrinkr). Qhathanisa ubuchule be-PhotoShrinkr kanye nesixhumi esibonakalayo somsebenzisi nezinye izindlela nezinye izinhlelo zokusebenza ngokwakho.
Ngezansi ukuqhathaniswa kwefayela le-6 meg PNG elehliselwe ku-288 K ukwehliswa kwe-96% ngosayizi waleso skrini.
Amafayela angempela ayaboniswa. Zama ukuhudula isilayida ukuze ubone uma ngabe ubona noma yimuphi umehluko kwikhwalithi ebonakalayo phakathi ngaphambi nangasemva.
Yilande mahhala, izame ezithombeni zakho, kuma-jpg nakuma-png bese ubona ukuthi ingakufezani. Qhathanisa nalokho osusebenzisa kakade ukunciphisa izithombe zakho nezithombe-skrini.
- Kungezwe ukwaziswa. isici esisha sokuphepha se-apula.
- isengezo sangaphambilini sokulondoloza usuku olwakhiwe, olushintshiwe nolwavulwa.
- ukulungiswa kwangaphakathi.
- izibuyekezo nokuthuthuka kwe-mojave
- Izinguquko eziningi ku-UI
- ezinye izingxoxo zishintshiwe
- Khulisa obala nosayizi we 'dala nge-photoshrinkr watermark'
- Kungezwe ukuguqulwa kwe-heif
- Isheke ungeze izibuyekezo
- Kungezwe amafayela e-zip
- isivinini esithuthukisiwe
- ngaphambi / ngemuva kokuqhathanisa okushayelwe kangcono
- Noma yisiphi isithombe esingeziwe sikhethwe ngokuzenzekelayo ku-ui
- Ukuthuthuka okuningi ku-ui
- Manje kuvuselelwe ukubonisa kwesokudla lapho into yokugcina icutshungulwa.
- Lungisa ifonti ku-About box.
- Lungisa i-bug uma ungeza into entsha ngenkathi uyicubungula kwesinye isikhathi ukushayeka.
- Manje bonisa inkomba yenqubekela phambili lapho ukhetha into entsha ngenkathi ukhiqiza ukubuka kuqala
- Vala ukukhetha okuzenzakalelayo lapho ungeza izinto ukuthuthukisa ukusebenza
- Ngabe kukhona okunye okwenziwe kahle.
- susa omunye umyalezo welogi ngaphandle kokuthi i-Debug inikwe amandla.
- Isixwayiso esilungisiwe mayelana neCoreAnimation: isexwayiso, intambo esusiwe nge-CATransaction engazinikeli
- Ishintshelwe kwikhodi yesikhathi ukusebenzisa i-100 yesinqumo sec.
- manje kukopishwe isithombe se-src uma usayizi wesithombe esenziwe kahle ulungile
- Shintsha ukulayishwa kwesithombe ukuze wenze ukulayisha ngemuva ukuze i-UI isebenze kahle. Ukukhishwa:
- kopisha isithombe se-src uma sincane
- ayisusi idatha ye-meta noma iphrofayili yombala.
- Vala ekukhululweni kokuqala.
28 Ephreli 2020 kuMacUpdate.com
Ngingumthwebuli zithombe okhuthele. I-Nikon DSLR D7500 yami idala amafayela wefomethi ye-JPG ayi-15 +. Lapho ngidinga ukucindezela isithombe ngangizosebenzisa omunye wabahleli bezithombe zami futhi ngimane ngilondoloze ifayili ngaphandle kwezinguquko zesithombe. Ngingagcina kalula uhhafu waleso sayizi. Ngithole isoftware yePlum Amazing ngenkathi ngifuna enye into ngaphandle kwesoftware yesithombe. Ngihlolile futhi ekugcineni ngathenga izinhlelo zabo zokusebenza ezimbalwa. Bengisebenza ku-albhamu yezithombe eku-inthanethi enezithombe eziningi. Empeleni izithombe zamatshe asemathuneni aseKentucky njengengxenye yalokho engikubize nge- “The Cemetery Trail” njengoba kugqugquzelwe yi- “The Bourbon Trail” lapha eKY. Ngangikhungathekile ngejubane lokulanda ukubuka amafayela kasayizi ogcwele futhi ngicabanga ukuthi ngizozama i-PhotoShrinkr kusuka ku-Plum Amazing. Ngilande idemo ngayisebenzisa esithombeni. Usayizi wokuqala wawungaphezu kwama-megs ayi-13. Lapho ngiyicindezela usayizi manje wawungu-2.2 megs. Yayincane kakhulu kangangokuthi kwaba yinto eshaqisayo. Ngizamile ezinye ezimbalwa ngemiphumela efanayo. Isici esisodwa esihle sohlelo isilayida esibonisa isithombe sangaphambi / ngemuva futhi ungasilayida ubheke emuva naphambili ukubona noma yiluphi ushintsho kwikhwalithi. Ekuvivinyweni kwami ​​ngibone umehluko omncane kakhulu. Ngokulayisha ku-albhamu yezithombe eku-inthanethi lokhu kusebenza kahle. Ukube bengizoba nesithombe sami esisodwa ephrintiwe ngefomethi enkulu bengizosebenzisa ifayili langempela. Leli zinga lokucindezelwa lisondele kakhulu kumlingo wamafayela we-JPG aphuma ku-Nikon yami. Ngemuva kwezithombe ezimbalwa zokuhlola ngithenge uhlelo lokusebenza. Ngize ngashintsha ama-imeyili ambalwa wokusekelwa nonjiniyela mayelana neminye imibuzo futhi ngathola impendulo esheshayo. Kwesinye isikhathi ugijima unjiniyela wesoftware oqonda kahle ukuthi ungakha kanjani isoftware enhle. IPlum Amazing ingenye yalezi zinkampani. Kunconywe kakhulu uma udinga ukucindezelwa kweJPG.